प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा काण्डैकाण्डको कीर्तिमान, के के सार्वजनिक भए ?
बिहीबार चैत २७, २०७६/ Thursday 04-09-20
काठमाडौं । मुलुक अहिले कोरोनाभाइरसको उच्च जोखिममा छ । स्वास्थ्य उपकरण नभएकाले विदेशबाट फर्केका हजारौ नेपालीको परीक्षण गर्न सकिएको छैन । दुई सातादेखि मुलुक लकडाउनमा छ । अस्पतालमा उपचार नपाई मृत्यु हुनेको संख्या यसबीचमा एक दर्जन बढी पुगिसकेको छ । तर, सरकार भने कछुवाको गतिमा हिँडेको छ ।
दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केपी ओलीले भनेका थिए, देशमा अब विकासको मूल फुट्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक हुने शृंखला अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।
निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो, कम्युनिस्टले चुनाव जितेर सरकार चलाएमा भ्रष्टाचार बढ्छ । आफन्त, नातागोता, भाइभतिजावादको उदय हुन्छ । अर्थात् मुलुकमा क्रोनी क्यापिटालिज्म लागू हुन्छ ।
कांग्रेसले त्यसबेला घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको कुरालाई जनताले पत्याएका थिएनन् । चुनावी प्रोपोगन्डा भएको बुझेका थिए ।
तर, अहिले एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितताका विषय समाचारमा आउन थालेपछि कांग्रेसले त्यसबेला उल्लेख गरेको कुरा सत्य सावित भएको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुक यती ग्रुप र ओम्नी समूहलाई ठेक्कामा चलाउन दिएका रहेछन् ।
दिवंगत पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको यती समूह र ह्वाइट हाउस कलेजका सञ्चालक युवराज शर्मा तथा भाटभटेन्री सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको ओम्नी समूहले मुलुकमा जे जति सरकारी ठेक्कापट्टा खुलेका छन्, सबै नियम कानुन संशोधन गरेर दिएको पाइएको छ ।
ओली सरकारमा रहेका कुनै पनि मन्त्री सद्दे निस्किएनन् । गोकुल बास्कोटा ७० करोड कमिसन काण्डमा पदच्यूत भए । अहिले ईश्वर पोखरेल र भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुछिएका छन् । यसअघि रवीन्द्र अधिकारी वाइडबडी खरिदकाण्डमा जोडिए । विना मगरमाथि २५ करोड घूस मागेको आरोप छ ।
३३ किलो सुन तस्करी काण्ड, यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेड, एनजीओ आईएनजीओलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संरक्षण, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याकाण्ड निष्कर्षमा नपुग्नु, प्रदेश सरकारका करिब एक दर्जन मन्त्री यौन दूराचारमा फस्नु, सभामुख नै बलात्कार घटनामा मुछिनुलगायत सबै ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला घटेका छन् ।
१ बर्षको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गरे नारायणकाजी श्रेष्ठले
हजुरबुबा बने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन
कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्ता ५ टिप्स
गणेश भगवानले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल जेठ १३ गते मंगलवारको राशिफल
बच्चासहित आएको माउ हात्तीको आक्रमणबाट युवकको मृत्यु
कोराना सङ्कटका बेला योगाभ्यास अति उपायोगी हुने - अध्ययन
गड्डाचौकी नाकाबाट दुई हजारभन्दा बढी नेपाली भित्रिए
एक प्रहरी निरीक्षकमा देखियो कोरोना संक्रमण
जाजरकोट घटना : नवराजसँग गएका तीन जना युवाको शव फेला, वडाध्यक्षसहित १२ जना पक्राउ
उदितनारायण झा र मनिषा कोइरालासँग यही कारण भिन्नता छ
संसदमा ओलीको सम्बोधनपछि चीनको पत्रकार सम्मेलन : एकपक्षीय रूपमा कदम नचाल्न चेतावनी
भारतीय पूर्व सैनिकको खुलासा– कम्युनिष्टलाई सत्तामा पुर्‍याउन, हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था हटाउन भारतको भूमिका
'कुछ कुछ होता है' मा शाहरुखकी छोरी बनेकी सना भइन् यति हट
यी नायिकाको घरमा गएर डाको छोडेर रोएका थिए सलमान
दशगजाबाट हटायो भारतले सुरक्षा पोष्ट, सयौं नेपाली नागरिक र सुरक्षाकर्मीले दिएनन् बनाउन
के छ सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिमा ? हेर्नुहोस् पूर्णपाठ